भिडियो Archives - ताजा समाचार
Oct122019 by ताजा समाचारNo Comments
अपाङ्ग भनेर हेप्दा रुन मन लाग्छ, खुट्टाको सहाराले स्वर्णिम अक्षर कपीमा कोर्दै
ताजा समाचार । असोज २५, काठमाडौं उमेरले उनी २२ वर्षकि भईन । उनी अहिले कक्षा ६ मा पढ्छिन । जन्मजात अपाङ्ग भएकी उनको दुवै हात चल्दैन। उठेरै खुट्टाको औलाहरुको सहायताले उनले अरु विद्यार्थीहरु भन्दा अझ छिटो र शुद्ध लेख्छिन । सो कक्षाकि उनि अब्बल विद्यार्थी हुन् । उनि हुन् दोलखा को ढुंगेश्वारी माध्यामिक विद्यालय जिरी –५, ढुंगेश्वारीकि छात्रा कान्छी जिरेल । जिरी नगपालिका ४ निवासी रिफले जिरेल र तुला माया जिरेलको कोखबाट जन्मिएकी कान्छी पढेर ठुलो मान्छे हुने बताउछिन । सपाङ्ग भएर मात्र मानिसहरु सक्षम हुन्छन् भन्नेहरुलाई उनको सक्षमताले चकित पारेको छ । खाना खुवाउन र दिशा पिशाव गराउन मात्रै उनको समास्या हो । उनले खुट्टाकै सहायताले लेख्ने मात्र होइन मोबाइल चलाउने लुगा धुने समेत गर्छिन । सामान्य किशान परिवारमा जन्मेकी कान्छीको ६ दिदिबहिनि भने सपाङ्ग नै छन् । गाउ देखि बिद्यालयसम्म पुग्न उनलाई १ घण
संगै काम गरेका पत्रकारको निधन भएपछि रवी लामिछाने पुगे श्रदान्जली दिन आर्यघाट (भिडियो)
वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्रदेव आचार्यको कलेजोमा देखिएको खराबीका कारण ६१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । दुई दशकसम्म नेपाल टेलिभिजनको समाचार प्रमुख भई नायब महाप्रबन्धकबाट अवकाशप्राप्त उहाँ हाल न्यूज–२४ को समाचार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । कलेजोको रोगका कारणले असामयिक निधन हुनुभएका स्व आचार्यको आइतबार नै पशुपतिस्थित आर्यघाटमा अन्तेष्टि गरिएको छ ।पारिवारिक सदस्य तथा शुभचिन्तकहरुको सहभागितामा उहाँको हिन्दू परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरिएको हो । उहा कलेजोसम्बन्धी समस्याबाट पीडित रहँदै आएका थिए। केहि दिन अगाडी वीर अस्पतालमा उनको उपचार भएको थियो। उपचारपछि घर फर्किएका आचार्यलाई पुनः सो समस्याले च्यापेपछि शनिबार नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। नेपाल टेलिभिजनमा २०४४ सालबाट सेवा सुरू गरेका आचार्य पछिल्लो दुई वर्षदेखि न्यूज-२४ मा समाचार प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। त्यस्तै उनले लामो समयसम्म पत्रकारिता क
Oct52019 by ताजा समाचारNo Comments
आकाशमा हुनुपर्ने नेपाल एयरलायन्सको जहाज सँधै किन ग्राउन्डेड ? छोराको हाजिर बाबुले गर्छन् ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४३९ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । निम्न विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएका छन् : १. नेपाल एयरलायन्स किन सँधै घाटामा हुन्छ ? काठमाडौं । कमजोर व्यवस्थापनका कारण नेपाल एयरलायन्सका अधिकांश हवाइजहाज ग्राउण्डेड छन् । सानो समस्या भएर ग्राउण्डेड भएका प्लेनहरु पनि बेलामा मर्मत नगार्दा झन् बिग्रिदै गइरहेका छन् । धेरै कमाउने भनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ल्याइएको वाइड बडी विमान १० दिन ग्राउण्डेड भयो । दसैंको मुखमा विदेशी एयरलायन्सलाई भ्याई/नभ्याई भइरहेका बेला वाइडबडी अन्नपूर्ण भने सेप्टेम्बर १७ देखि सेप्टेम्बर २७ सम्म १० दिन ग्राउण्डेड भयो । वाइडबडी नउड्दा दिनकै करोडौं रुपैयाँ घाटा लाग्यो एयलायन्सलाई । २. जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा नक्कली कर्मचारी !
काठमाडौँ : नेपाली कला, संस्कृति र भाषाको आफ्नै महत्व छ र यसको अलग्गै पहिचान छ। तर पश्चिमा संस्कृति र आधुनिक जीवनशैली अपनाउने होडमा नेपाली भाषा तथा संस्कृति ओझेलमा परिरहेको छ। जापानका हारुहितो नोजु नेपाली भाषा विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता हुन्। धेरै वर्ष अगाडी नेपाल आएका उनले नेपाली भाषामा अनुसन्धान गरेका छन्। उनले जापानी साहित्यलाई नेपालीमा र नेपाली साहित्यलाई जापानी भाषामा अनुवाद गरेका छन् भने नेपाली टेलिचलचित्र निर्देशन समेत गरेका छन्। हारुहितो नेपाल आउँदा सडकमा गाडीभन्दा गाई गोरु धेरै थिए । अहिले नेपालमा भएको भौतिक विकासले उनलाई खुशी लाग्छ। तर, उनलाई नेपालले विकासको जुन बाटो समात्नुपर्थ्यो, त्यो नसमातेको जस्तो महसुस हुन्छ। देश विकासमा भाषाको ठूलो भूमिका हुन्छ। जापानले विकासका सुरुका दिनमा संसारभर छरिएका जापानिजलाई देश फर्किन आग्रह गरेको थियो र देशभित्रै सबैले रोजे अनुसारको विषय
भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालको चरित्र हत्या गर्ने नियतले सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोष्ट हुन थालेपछि त्यसविरुद्द प्रहरी सक्रियताको माग उठेको छ। शनिबारका दिन ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा आ’क्रमण भएपछि शाही समर्थकहरुले रेनु दाहालको चरित्र ह’त्या गर्न खोजेका हुन्। शाही समर्थकहरुले रेणु दाहालमाथि अश्लिल गा’ली गलौज गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जालमा अपाच्य तस्वीर र अन्य सामग्री पोष्ट गरेका छन्। जननिर्वाचित मेयरविरुद्ध गरिएको यस्ता हर्कतविरुद्ध नेपाल प्रहरीले सक्रियता देखाउन नसकेको भन्दै प्रहरीको समेत आलोचना गरिएको छ। शाही समर्थकहरुले उक्त घटनामा रेणु दाहालको हात रहेको भन्दै उनको आलोचना गरेका हुन्। रेणु दाहालसँगै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत जोडेर आलोचना गरिएको देखिन्छ। यसै बीच ज्ञानेन्द्र शाहीका समर्थकले काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरबाट बोल्दै मेयर दाहालमाथि आक्रोस पोखेकी छिन । दाहालल
राजेश हमाल र करिश्माको अभिनय रहेको अर्को धमाकेदार गीत बाहिरियो
Posted in कला-मनोरञ्जन, भिडियो
काठमाडौँ । चलचित्रमा कुनै समय एकछत्र राज गरेको चर्चित जोडी हो महानायक राजेश हमाल र सुन्दरी नायिका करिश्मा मानन्धरको जोडी । यो जोडीलाई फेरी एक पटक सानो पर्दामा एकसाथ अभिनय गराउने काम गरेका छन् गायक भीम चापागाईले । भीम र गायिका मेलिना राइको सुमधुर स्वर रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भए लगत्तै चर्चाको शिखरमा छ । दीपक शर्माको शब्द र संगीत रहेको गीतमा देवेन्द्र पाण्डेको कोरियोग्राफी र निर्देशन रहेको भिडियोको छायांकन उत्सब दाहालले गरेका छन् भने सम्पादन अच्युत बजागाइले गरेका छन् । जसमा अभिनय महानायक राजेश हमाल र सुन्दरी नायिका करिश्मा मानन्धरको रहेको छ । कुनै समय चलचित्रमा एकसाथ काम गरेर वाहवाही पाएको यो जोडीले फेरी एकसाथ काम गर्दा गीतले फिल्मकै झल्को दिएको कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन् । गीत रिलिज भएको १ दिनमा नै करिब ५ लाख दर्शकले हेरिसकेका छन् । राजेश हमाल र करिश्माको अभिनय र
काठमाडौँ-धनगढीकी २७ वर्षीया खगित्रा शाहीले बुधवार एकैपटक चारवटा बच्चा जन्माइन्। यो भन्दाअगाडि उनकी ६ वर्षकी एक छोरी छिन्। खगित्रा र उनका श्रीमान पदमबहादुरलाई छोरीपछि अर्को सन्तानको चाहना भयो। उनीहरुले सन्तान जन्माउने निधो गरे। तर उनीहरुले सोचे जसरी सजिलैसँग बच्चा बसेन। चेकजाँच गराए। चिकित्सकले पहिलो सन्तानपछि लामो अन्तर भएका कारण बच्चा नबसेको बताए। खगित्रालाई अण्डा उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने औषधि दिइयो। चिकित्सकले उनलाई औषधिले काम नगरे टेष्ट्यूब बेबी गर्नुपर्ने सुझाब दिएको पदमबहादुरले बताए। उनले भने, ‘बच्चा नबसेपछि हामीले डाक्टरलाई देखायौँ, उहाँले अण्डा बढाउने औषधि दिनु भयो, औषधिले काम नगरे टेष्ट्यूब बेबीबाट जन्माउनुपर्छ भन्नु भएको थियो।’ खगित्राले चिकित्सकले भने बमोजिम औषधि खाइन्। खगित्रालाई टेष्ट्यूब बेबी गर्नुपर्ने आवश्यकता परेन। उनी गर्भवती भइन्। दोस्रो सन्तान जन्मिने भएपछि खगित्रा
Sep262019 by ताजा समाचारNo Comments
सरकारको कामप्रति जंगिए भिम रावल, उपेन्द्र यादवलाई तत्काल सरकार छोड्न चेतावनी (भिडियो अन्तरवार्ता)
काठमाडौं–सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली नेता एवम् स्थायी समिति सदस्य भिम रावलले नेपालको पहिचान र अस्थित्व र सांस्कृतिक धरोहर मेटाउने खतरा षड्यन्त्र भैरहेको खुलासा गरेका छन् । सुत्र टिभीको ‘सुत्र बहस’ मा कुरा गर्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका रावलले वर्तमान सरकारले राम्रो नराम्रो के गरेको छ भन्ने कुरा पार्टीको स्थायी समिति बैठकपछि मात्रै बोल्ने बताए । उनले पार्टीका संरचना पनि साँघुरिदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । नेता रावलले स्थायी समिति बैठक ३ महिनामा बस्ने विधानमा उल्लेख भए पनि आज ८ महिनासम्म नबसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले सरकारका गतिविधि हेर्दा जनताले सन्तोष मान्ने कुनै ठाँउ नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सरकारको र आफ्नो पार्टी नेकपाको यस्तै रवैया रहिरहे सरकार र पार्टी दुबै रहदैनकि भन्ने चिन्ता रहेको समेत प्रष्ट पारे । उनले नेकपा र चिनियाँ कम्युन
Sep212019 by ताजा समाचारNo Comments
सत्याकृत ब्याण्डले दशैंको मुखमा ल्यायो ‘हजार जुनी’
काठमाडौं – समाजमा सद्भाव र सकारात्मक उर्जा सञ्चार गर्ने अभिप्रायले यथार्थ र सत्यता बोकेका गीतहरु सार्वजनिक गर्दै आएको सत्याकृत ब्याण्डले दशैंको मुखमा ‘हजार जुनी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको छ । प्रकृती, प्रेम, ईश्वर, सत्य र देश भक्तिपूर्ण संगीत दर्शकहरुमाझ पस्कदै आईरहेको ब्याण्डले शुक्रबार ‘हजार जुनी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको हो । विदुर न्यौपानेको शब्द संगीतमा रहेको उक्त गीतमा सुर साधुको स्वर रहेको छ । यस गीतको भिडियोमा छायांकन, सम्पादन तथा निर्देशन विजय गौतमले गरेका छन् । नेपाल र मलेसियामा छायांकन गरिएको उक्त गीतको रेकर्डिङ्ग मुम्बईमा भएको हो । यस गीतमा मिक्सिङ तथा मास्टरिङ बलिउडका चर्चित साउण्ड ईन्जिनियर आमिर शैखले गरेका छन् । सत्याकृत ब्याण्डले पूर्विय, पश्चिमी, रक-पप, शास्त्रिय, लोक, फ्यूजन शैलीका गीतहरुलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
Sep202019 by ताजा समाचारNo Comments
रोजगारी नेपालको प्रमुख समस्या हो। त्यसैले विदेसिने युवाको लर्को अनन्त छ। गाउँघरमा विदेश जानु सँस्कृति बनिसकेको छ। युवाहरुमा सानोतिनो काममा आँखा नलगाउने, बरु खाडी मुलुकमा चर्को घाम सहेर पसिना बगाउन तयार हुनेहरुको संख्या बढ्दै छ। अझ राम्रो तलब, सजिलो र काम र गतिलो देश भए त झनै गज्जब! देशमा उद्योग, कलकारखानाको कमी हुनु, भएको पनि पनि राम्रोसँग नचल्नु, राजनीतिमा अस्थिरता, स्रोत तथा साधनको उपयोग नहुनुजस्ता विविध कारणले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। अध्ययनका लागि होस् वा कामका लागि विदेश जाने धेरै छन्। युवा विदेशिनुको पीडा पनि देशले भोगिरहेको छ। गाउँघरमा खेतबारी बाँझो रहन थालेको छ। रेमिट्यान्स छ बढेको छ, तर त्यससँगै पारिवारिक विघटनजस्ता समस्या थपिएका छन्। विदेश जाने क्रममा हुने ठगी, विदेशमा कामको बोझ, तनाव र आत्महत्यासम्मका घटनाहरुमा वृद्धि भएको छ। ईराकमा अहिले दोलखाका एक